A Helping Hand to Flood Victims in Upper Sagaing Region « One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
One Dollar Fund – Myanmar (ODF Myanmar)
Available versions: English | Myanmar
A Helping Hand to Flood Victims in Upper Sagaing Region
ODF Myanmar အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းအတွင်း ရွှေဘို၊ ရေဦး၊ ကန့် ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ကောလင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများထံသို့အရေးပေါ်လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်မည့်အကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ယခင်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းခဲ့မှုနှင့် သစ်ခဲကြီးရေလှောင်တမံကျိုးပေါက်မှုတို့ ကြောင်း ယင်းဒေသများတွင် ဒေသခံများနှင့် ကျွဲနွားများ မျောပါခြင်း၊ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၃ဝဝဝကျော် ပျက်စီးခြင်း၊ တံတားများကျိုးပျက်ခြင်းနှင့် မီးရထားနှင့်ကားလမ်းများ ပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။လက်ရှိတွင် အသက်ဆုံးရှံးသူစာရင်းကို မသိရှိရသေးသော်လည်း ကယ်ဆယ်ရေးတပ်သားတစ်ဦးအပါအဝင် ဒေသခံ ဆယ်ဂဏန်းကျော် သေဆုံးပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခုအခါ ရာချီသော ရေဘေးသင့် မိသားစုများမှာ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ဒေသတွင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် မှီခိုလျက် ရှိပါသည်။တာဝန်ရှိသူများနှင့် အခြားသော အလှူရှင်များမှ ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့် လိုအပ်သော အကူအညီများပေးပို့ လျက်ရှိသော်လည်း (၅ဝဝဝ) ကျော် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများမှာ အကူအညီလိုအပ်နေသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။သို့ ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်များ ODF Myanmar အနေဖြင့် ထိုဒေသများရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အကူအညီပေးရန် စီစဉ်ထားပြီး မိတ်ဆွေများနှင့် အလှူရှင်များအား ယခင်အလှူများကဲ့သို့ ပင် ကျွန်တော်တို့ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် အလှူငွေများအား ၂၀၁၅-ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက် (သောကြာနေ့ ) အထိ ကောက်ခံသွားပါမည်။စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဘဏ်စာရင်း 066-6-025032 (DBS Saving Plus) သို့ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်စာရင်း 0038201010014058 (AYA Bank) သို့ လည်းကောင်း အလှူငွေများ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ အသေးစိပ်အချက်အလက်များအား ODF Myanmar Facebook page အား message ပို့ ၍ဖြစ်စေ၊ ကိုငြိမ်းချမ်းထွေး (+959 253688885)၊ ပုံကြီး (+659 8976282) ထံ ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
(ဓာတ်ပုံများအား EMG Media Group နှင့် Google Images မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
ODF Myanmar would like to urge for emergency help to assist flood victims from upper Sagaing region which includes Shwebo, Ye-U, Kanbalu, Kyunhla, Kawlin and other surrounding districts.During last week, continuous heavy rain in upper Sagaing region and burst of Thitkhelgyi dam resulted in massive floods which swept away residents and cattle, damaged more than 13,000 houses, collapsed bridges and washed away railway sleepers and roads in those areas.The death toll is not confirmed yet at the moment though there are reports on deaths of tens of residents including one police corporal from the rescue team.
Currently, hundreds of families are seeking refuge at local monasteries and are being given accommodation and food.Although the relief aids and necessary provisions are being transported to the flood-hit places by authorities and donors, more than 5,000 victims are still in need of assistance.Therefore, ODF Myanmar has arranged plans to offerahelping hand to flood victims from those areas and would also like to urge all of our friends and donors to join us as in previous donation plans.
In order to collect funds for flood victims in emergency needs and in essential needs for re-establishing their lives, ODF Myanmar has planned to collect donations till 31st July 2015 (Friday). Donors from Singapore and other countries can transfer contributions to ODF Myanmar bank account: 066-6-025032 (DBS Saving Plus) – Singapore and those from Myanmar can make transfer to ODF Myanmar bank account: 0038201010014058 (AYA Bank) – Myanmar. For further enquiries, please dropamessage to ODF Myanmar Facebook page or contact Ko Nyein Chan Htwe (+959 253688885) and Pon Gyi (+65 98976282).
(Photo credit goes to EMG Media Group and Google Images.)
We welcome you to join us and makeadonation to the One Dollar Fund - Myanmar(ODF-Myanmar). All donations received will be deposited directly into the account of ODF Myanmar. ODF Myanmar will ensure accountability and transparency in the use of donated funds. We invite the media and general public to help supervise this process.
Read more about Donation
ODF Myanmar,anonprofit organization founded byagroup of Myanmar. ODF Myanmar is dedicated to improving the quality of life , education and health of poor and orphan. We believe that every individual counts from all of helping hands would benefit from beingapart ODF Myanmar. Our aim is to reach out to as many as poor as possible and change their lives for the better , ensuring they haveachance at life opportunities. We believe that all the poor should be given an equal opportunity of basic needs such as food, shelter , health care and education.
Read more about ODF
ODF at Social Networks
We invite you to come and be our fans! By joining our facebook page, you will be able to see our updated news, donation events and activities.
Let’s help together in rehabilitation stage
Balance Sheet on Disaster Assistance Programs (18-Aug-2015)
Help Save Myanmar Flood Disaster
2015 May & June Donation Plan
Copyright © One Dollar Fund Myanmar . org. All rights reserved.
Contributors for Logo & Web Designed by MYO HAN HTUN and developed by MYO KYAW HTUN